के पलले गर्दैछन् सत्यम् ? « Mazzako Online
के पलले गर्दैछन् सत्यम् ?
अभिनेता पल शाहले फिल्म सत्यम् गर्ने चर्चा चलिरहेको छ । फिल्मको निर्माणपक्षले पनि पल शाहले साइन गर्न मात्र बाँकी रहेको बताएको छ ।शंकर कार्कीको निर्देशनमा बन्न लागेको फिल्म सत्यम्मा राजेश हमाल, अनुप विक्रम शाही फाइनल भैसकेका छन् ।
अभिनेता राजेश हमाल ४ बर्षपछि पर्दामा फर्किन लागेका हुन् । यो फिल्मको बजेट पनि ३ करोड माथि रहने बताइएको छ । फिल्मको मुख्य अभिनेताको रुपमा पल शाहलाई पनि अफर गरिएको छ । निर्माणपक्षले फिल्ममको साइन हुन मात्र बाँकी रहेको बताउँदा अभिनेता पल शाहले पनि संझौता हुन मात्र बाँकी रहेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार, उनी फिल्ममा काम गर्ने मुडमा छन् । अभिनेता राजेश हमाललाई नेपाली फिल्ममको भगवान भन्दै आएका पलले उनीसँग काम गर्न पाउँदा उत्साह व्यक्त गर्नु स्वभाविक नै हो । पल र राजेशले एकसाथ फिल्ममा काम गरेका छैनन् । पलले फिल्म विर विक्रम २ मा अभिनेता राजेश हमालले नृत्य गरेको पिरतीको मिठो तिर्सना बोलको गीतको रिमेक भर्सनमा नृत्य गरेका थिए ।